भोलिदेखि सार्वजनिक यातायात नचल्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्था पनि पूर्ण रुपमा बन्द ! - Nepali in Australia
October 10, 2020 autherLeaveaComment on भोलिदेखि सार्वजनिक यातायात नचल्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्था पनि पूर्ण रुपमा बन्द !
काठमाण्डौ । पाल्पाको निस्दी गाउँपालिकामा अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।
म्याग्दी । जिल्लाको बास्कुना गाउँका तिलक गुरुङले एक हप्ताअघि दुई लाख रुपैयाँको सुन्तला पोखरामा बेचे । बास्कुना गाउँभरिमा जति जनाले सुन्तलाखेती गरेका छन्, ती सबैका बोटको फल पोखरा, नारायणगढ र काठमाडौंसम्म पुग्छ । कति किसान त आफ्नै गाडीमा पोखरा लगेर बेच्छन् । तिलक भन्छन्, ‘आफ्नै गाउँमा नबिके पनि बिक्रीको समस्या छैन ।’ बास्कुनाका बासिन्दाले यस वर्षको अहिलेसम्म ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सुन्तला बेचे ।
सुन्तलाबाटै स्याङ्जा पुतलीबजारका बोधराज अर्यालको कमाइ ६ लाख भयो । पर्वत बाँसखर्कका किसानका सुन्तलाबोटमा पोहोरभन्दा यसपालि धेरै फल लागेको थियो । बेच्न भने कुनै समस्या भएन, सुन्तला पोखरा, बुटवल र नारायणगढ पुग्यो । बाँसखर्क, सलिजा, देउपुर, तिलहार, कुर्घा, लिमीठाना, पाङराङ, त्रिवेणी, बेहुलीबास, सरौखोला गाविस पर्वतमा सुन्तलाका पकेट क्षेत्र हुन् ।
बितेको वर्ष चार हजार पाँच सय टन सुन्तला फलेको यहाँ यसपालि पाँच हजार पाँच सय टन पुग्ने अनुमान जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको छ । स्याङ्जाबाट पोहोर २६ करोड १६ लाख रुपैयाँको सुन्तला बजार गएको थियो । यो कमाइ यसपालि बढेर ३५ करोड ६५ लाख रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको कृषि योजना अधिकृत तिलक जिसीले बताए । ‘यो जिल्लामा यसपालि सुन्तला उत्पादन १३ प्रतिशत वृद्धि भएको अनुमान छ’, उनले भने, ‘११ हजार पाँच सय टन उत्पादन भएको अनुमान गरेका छौं ।’